“Man United waa kooxda ugu weyn adduunka, waana garaaceynaa Liverpool.” – Maguire – Gool FM
(Manchester) 17 Jan 2021. Daafaca Manchester United ee Harry Maguire ayaa sheegay in kooxdiisu ay awood u leedahay inay ka guuleysato Liverpool, kulanka ay caawa ku wada ciyaari doonaan garoonka Anfield.
Kulanka ugu weyn sanadkan Ingiriiska ayaa caawa ka dhacaya garoonka Anfield, iyadoo kooxda xafidanaysa Premier League ay soo dhoweynayso hoggaamiyeyaasha horyaalka ee Manchester United.
Manchester United ayaa hogaanka horyaalka ku heysa 36 dhibcood, halka Liverpool ay ku jirto kaalinta labaad iyadoo leh 33 dhibcood, sidaas darteed waxaa la filayaa in ciyaarta ay labada kooxoodba u noqon doonto Imtixaan adag.
Hadaba wargeyska “Daily Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Harry Maguire kahor kulanka caawa, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaan nahay kooxda ugu weyn aduunka, si kastoo ay dadka nooga hadlaan banaanka, waxaan ku galeynaa ciyaar kasta anaga oo ujeedkeenu yahay inaan guuleysano, kaliya waxaan rajeyneynaa inaan guuleysan doono, tani waa maskaxda aan ku heysano qolka labiska, waana maskax guul xaalad walba.”
“Waxaan cadaadis weyn saaraynaa nafteena, ujeedkeena ma ahan inaan guuleysano kaliya kulamada, laakiin ujeedka ayaa ah inaan gaarno guulo, waxaan ku dhameysanay xilli ciyaareedkii hore kaalinta seddexaad waxaanna u soo baxnay qaar ka mid ah semi-finalada, laakiin waxaan dooneynaa inaan horumar sameyno waana inaan sameynaa horumar.”
“Waxaa naga go’an inaan ka guuleysano Liverpool, waxaan leenahay maskax guuleed, waxaana sidaas ku soo bandhignay kulamo badan kaddib marki aan dib u dhacnay, gaar ahaan kulamada ka baxsan garoonkeena, Waxaan arkay rikoorkeena iyo kulamada aan soo laabashada sameynay.”